इटहरीमा पहिलो पटक हि–पप सांगीतीक कार्यक्रम हुने « Deshko News
इटहरीमा पहिलो पटक हि–पप सांगीतीक कार्यक्रम हुने
इटहरी । आखिर गीत संगीत सुन्ने रहर कसलाइ पो हुँदैन र ! त्यसमा पनि अनेकतामा एक भने झैँ आधुनिक, पप र रक बाहेक छुटटै शैलीको आभाष दिने अर्को विद्या हो हि पप रयाप । झट्ट सुन्दा अलिक पृथक लाग्ने सामान्य गीत भन्दा फरक शैलीको रयाप गीत विशेष गरी युवा पुस्ता माझ अझ धेरै लोकप्रिय भएको पाइन्छ ।
यसे बिच सुनसरीकाे इटहरीमा २०७५ सालको विदाई गर्दै २०७६ लाई स्वागत गर्न पहिलो पटक हि पप सांगीतीक कार्यक्रम हुने भएको छ । ट्र्याप नेपालको आयोजनामा चैत्र ३० जनता मावीको खेल मैदानमा हिपप सांगीतीक कार्यक्रम हुने भएको हो ।
पछिल्लो समय निक्कै लोकप्रिय बन्दै गएको हिपप युवाहरुको लागी भावना व्यक्त गर्ने माध्यम बनीरहेको कार्यक्रम संयोजक रवी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा पहिलो पटक इटहरीबाट हिपप कन्र्सट आयोजना गरिन लागेको आज इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ ।
नयाँ बर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने उदेश्यले यस प्रकारको सांगीतीक कार्यक्रमको आयोजना को तयारीमा ट्रयाप नेपाल रहेको बताईएको छ ।नयाँ वर्षको अवसरमा चर्चित र्यापर समिर घिसिङ (भिटेन) को प्रमुख प्रस्तुती रहने छ ।
कन्र्सटको मुख्य सपोर्टर टुवोर्ग बियर रहेको छ भने कन्र्सट साझ ५ बजे देखि राति ११ बजे सम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ । उक्त कन्र्सटमा स्थानिय कलाकार जिरो ग्य्राविटी क्रु ब्यान्डका सरोज श्रेष्ठको पनि प्रस्तुती रहने बताईएको छ ।
थाहा छैन जिन्दगि भन्दै शिल्पाले के गरिन यस्ताे ? भिडियो सहित
काठमाडौं चर्चित नेपाली गायिका अञ्जु पन्तकाे थहा छैन जिन्दगि बजारमा सार्वजनिक भएकाे छ । उक्त
इन्दिरा भट्टराईले ल्याईन् तिज गीत ‘नाचौ मितिनी’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गायिका इन्दिरा भट्टराईको स्वरमा चर्चित मोडल सम्झना बुढाथोकीको निर्देशन रहेको तिज गीत ‘नाचौ
संगीत चोरेको आरोपमा कालीप्रसाद विरुद्ध उजुरी
काठमाडौं । नेपाली संगीत जगत एकपछि अर्को चोरीको विवादमा मुछिँदै गएको छ। शम्भु राईले प्रकाश
सामाजिक सञ्जालमा बुढ्यौली रुप भाईरल बन्दै
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको प्रोफाइल बुढो बनेको देख्न सकिन्छ । ‘फेस